Norway oo sharcigii kala laabatay Gabar Soomaaliyeed oo horay diinta uga baxday | Voice Of Somalia
Norway oo sharcigii kala laabatay Gabar Soomaaliyeed oo horay diinta uga baxday
Posted on July 2, 2016 by Voice Of Somalia Image
Khadra waa Gabar qoraa ah caana ka ah warbaahinta Norway, waxeey kal hore ka baxday Diinta islaamka, waxeeyna mudo ku howlaneed aflagaadeenta Diinteena Suuban iyo Soomaalida ku nool Norway.
Khadra, waxeey dhawaan sheegtay in magaaladii ay ku dhalatay laga saaray Diiwaanka, waxeey sidoo kale sheegtay ineey tagtay Xafiiska Diiwaanka iyadoona halkaas kusoo ogaatay, in uu iyada qabtay sharciga ay Soomaalida Norway iyo ajaanibta kaleba ka qeeylinayeen maalmihii lasoo dhaafay.
Khadra, ayaa iyadoo hoos ku wadata Kaamirada Qarsoon su’aalo ku saabsan Gudniinka weydiisay Imaamyada Masaajida Norway qaarkood, waxaana Muuqaaladii ay duubtay markii dambe laga soo daayay Tv2. kadibna waxaa maalmihii iyo Bilihii ka dambeeyay abuurmay dood iyo cadaadis badan oo la saaray Muslimiinta Norway ku dhaqan guud ahaan, gaar ahaan Imaamyada masaajida.
Qaar kamid ah Imaamyadii ay soo duubtay, ayaa markii dambe sheegtay in muuqaaladii ay Gabadhaan soo duubtay ay yihii kuwo la gooy-gooyay oo sida ay su’aalaha iyo jawaabaha isku lahaayeen loo soo bandhigin.
Khadra waxaa iska haystay Nin Norwigian ah, waxeeyna u dhashay caruur badan, Khadra waxeey si weyn uga qeyb qaadatay meel uga dhicida diinteena Suuban, iyadoo mar sheegtay in Quraanka laga saaro aayadaha hoos u dhigaya xaqa dumarka, sidoo kale waxeey caan ku noqotay bahdilka Soomaalida Norway, iyadoo si joogto ah qoraalo iyo maqaalo uga diyaarisa.
Voice Of Somalia-SOMALI LEAKS,
GABAY:-Soo Joognay Maantana!!.
DAAWO:- Kacdoon Shacab Oo Ka Dhan Ah #ETHIOPIA Oo Bilowday